News | एप्पल
News | Tag: एप्पल
एप्पलको महँगी ‘कुल फ्याक्टर’
एजेन्सी । एप्पलका सामानहरुको मूल्य एकदमै बढ्दो मात्रामा छ । एप्पलको ल्यापटप, ट्याव, मोबाइल तथा इयरफोनको मूल्य मानिसहरुको घरको भाडाभन्दा पनि महँगो छ । यी सबै ग्याजेटहरुको मूल्य करिब ३५ सय अमेरिकी डलर पर्छ । उक्त मूल्य भनेको सामान्य अमेरिकन परिवारको साढे २ महिनाको घर भाडा हो ।
एप्पलको सामान किन साह्रै महँगो ?
एजेन्सी । एप्पलका सामानहरुको मूल्य एकदमै बढ्दो मात्रामा छ । एप्पलको ल्यापटप, ट्याव, मोबाइल, घडी तथा इयरफोनको मूल्य मानिसहरुको घरको भाडाभन्दा पनि महँगो छ । यी सबै ग्याजेटहरुको मूल्य करिब ३५ सय अमेरिकी डलर पर्छ । उक्त मूल्य भनेको सामान्य अमेरिकन परिवारको साढे २ महिनाको घर भाडा हो ।
यसै महिना सार्वजनिक हुनसक्छ एप्पल एयरपडस् प्रो !
अमेरिकी टेक कम्पनी एप्पलले सेप्टेम्बरमा नयाँ आइफोन ११, आइफोन ११ प्रो सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब कम्पनीले यसै महिना एयरपडस् प्रो पनि सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । केही दिनयता लगातार नयाँ डिजाइनका एयरपडस्का तस्वीरहरु लिक भइरहेका छन् । त्यस्तै रेन्डरलाई इन्टरनेटमा सेयर पनि गर्दै आएको छ ।
एप्पल कम्पनीका अनौठा तथ्यहरु
एजेन्सी । विश्वमै राज गरिरहेको कम्पनी हो एप्पल । एप्पल कम्पनीको पहिचान विश्वमा छुट्टै रहेको छ । यसका संस्थापक स्टिभ जब्सले उक्त कम्पनीको नाम राखेका थिए । उनले १५ वर्षसम्म जम्मा १ डलरमा काम गरेका थिए ।